မျှော်လင့်မထားသောဆိုးရွားသောကလေးဘဝအတွေ့အကြုံများနှင့်နောက်ဆက်တွဲမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါ - ဆွီဒင်လူမျိုးများလေ့လာမှု (1995–2011) - Your Brain On Porn
မမျှော်လင့်ဘဲဆိုးရွားသောကလေးဘဝအတွေ့အကြုံများနှင့်နောက်ဆက်တွဲမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါ: တစ်ဆွီဒင်လူဦးရေလေ့လာမှု (1995-2011)
စွဲလမ်း။ စာရေးသူလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်; PMC 2015 ဇူလိုင် 1 အတွက်ရရှိနိုင်ပါ။
စွဲလမ်း။ 2014 ဇူလိုင်; 109 (7): 1119-1127 ။
Doi: 10.1111 / add.12537
Giuseppe N. Giordano, Ph.D,1 Henrik Ohlsson, Ph.D,1 ဖြစ်သူ Kenneth S. Kendler, MD2 Kristina Sundquist, MD, Ph.D,1,3 နှင့် ဇန်နဝါရီ Sundquist, MD, Ph.D1,3
ထူးခြားသောစိတ်ထိခိုက်အတွေ့အကြုံ exposure မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုများအတွက်တဦးတည်းကောင်းစွာသိရှိသည့်အန္တရာယ်အချက်တခုဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့ဆွီဒင်ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်လူကြီးများ (အသက် 15-26 နှစ်) ၏အမျိုးသားရေးလူဦးရေအတွက်နောက်ပိုင်းတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါအပေါ်, အတွေ့အကြုံရှိဒုတိယ-လက်အလားအလာဘဝ-ပြောင်းလဲနေတဲ့ကလေးဘဝဖိအားများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။
ကျနော်တို့ Co-ဆွေမျိုး pair တစုံနှိုင်းယှဉ်နှင့်အတူပြည့်စုံ, ကော့အချိုးကျဇက်ဆုတ်ယုတ်လေ့လာဆန်းစစ်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။
ပြက္ခဒိန်နှစ်ကုန်မှာဆွီဒင်နိုင်ငံတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသူ 1984 မှ 1995 မွေးဖွားဆှီဒငျလူဦးရေအတွက်အားလုံးတစ်ဦးချင်းစီကိုသူတို့အသက် 14 နှစ်ပေါင်းလှည့်။ ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆက်တွဲအချိန် (ဆိုလို: 6.2 နှစ်ပေါင်း; Range 11 နှစ်) နှစ်တွင်မှာစတင်ခဲ့သူတို့ 15 လှည့်နှင့်ဒီဇင်ဘာလ 2011 (N ကို = 1,409,218) မှဆက်လက်ပြောကြားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်ကို variable ကို, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဥပဒေနှင့်ဆေးဆိုင် registry ကိုမှတ်တမ်းများကနေဖော်ထုတ်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါ, ဖြစ်ခဲ့သည်။ DSM-IV ဖိအားစံနှုန်းအတိုင်းကလေးဘဝဖိအား, ချက်ချင်းမိသားစုဝင်များနှင့်ကင်ဆာကင်ဆာ, လေးနက်မတော်တဆထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း, ချေမှုန်းရေး၏သားကောင်များ၏ diagnoses ၏ဒုတိယလက်အတှေ့အကွုံအသေခံပါဝင်သည်။ အခြားအ covariates မိဘကွာရှင်း, မိသားစုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသုခချမ်းသာများနှင့်မိသားစုမူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်သုံးစွဲခြင်းမမှန်မှုများပါဝင်သည်။
အားလုံးစဉ်းစားရှက်ကြောက်ဘို့ညှိနှိုင်းမှုပြီးနောက်ကလေးဘဝဖိအား '' မိဘသေခံခြင်း 'သို့မဟုတ်' 'မိဘချေမှုန်းရေး' 'ထိတွေ့တစ်ဦးချင်းစီ (HR = 2.63 (2.23-3.09) နှင့် 2.39 (2.06-2.79 မဟုတ်ကြတဲ့သူတွေကိုထက်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါကျော်နှစ်ကြိမ်အန္တရာယ်ခဲ့ ), အသီးသီး) ။
ဒုတိယလက် (ကင်ဆာဖြစ်စေ, သေရောဂါတွေဖြစ်တဲ့စော်ကားခံရခြင်းမိဘတစ်ဦးသို့မဟုတ်မှေးခငျြးအဖြစ်) တစ်ဦးထူးကဲစိတ်ထိခိုက်အဖြစ်အပျက်တွေ့ကြုံခံစားသူကို 15 နှစ်အောက်ကလေးများမကျင့်သောသူထက်တစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါဖွံ့ဖြိုးဆဲ၏ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်နှစ်ကြိမ်အန္တရာယ်ရှိသည်ဖို့ပေါ်လာပါသည်။
DSM- နေဖြင့်သတ်မှတ်အဖြစ်ထူးခြားသောစိတ်ထိခိုက်ဖြစ်ရပ်များ, ထိတွေ့မှု](ဆိုလိုသည်မှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် / သို့မဟုတ်ကလေးဘဝ, လူကြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချေမှုန်းရေး, ဒါမှမဟုတ်တိုက်ခိုက်ရေးအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှု) (မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါများအတွက်အများအပြားအသိအမှတ်ပြုအန္တရာယ်အချက်များတစ်ခုဖြစ်သည်1, 2) ။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများ၏ 90% ကျော်ဟာသူတို့ရဲ့တသက်တာအတွက်တဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုစိတ်ထိခိုက်ဖြစ်ရပ်သတင်းပို့ (2, 3); သို့သော်ဒီအသင်းအဖွဲ့နောက်ကွယ်မှယန္တရားများပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုစာပေထဲမှာထင်ရှားတဲ့အတွေးသုံးခုကျောင်းများနှင့်အတူရှင်းလင်းရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ ပထမဦးစွာကို 'Self-ဆေးဝါး' 'အယူအဆ (ရှိ4), အရာသည်တုန်လှုပ်စရာအဖြစ်အပျက်တစ်ဦးချင်းစီလုပ်သမျှအတိတ်စိတ်ဒဏ်ရာနဲ့ဆက်စပ်စိတ်ဖိစီးမှု၏ခံစားချက်များကိုနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မှ '' Self-ညွှန်ကြားပေး '' နှင့်အတူမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု precedes ကြောင်းဖော်ပြထားသည်။ ဒုတိယအချက်မှာမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအနာဂတ်စိတ်ဒဏ်ရာ (ထိတွေ့မှု၏တိုးမြှင့်အန္တရာယ်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သည့်တစ်ဦးက high-အန္တရာယ်အပြုအမူ, ကြောင်း, မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအတွက်စိတ်ထိခိုက်ဖြစ်ရပ် precedes သောသီအိုရီဖြစ်ပါတယ်5-7) ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဥပမာ unmeasured အချက်များအားဖြင့် '' artefact အယူအဆ 'စိတ်ထိခိုက်ဖြစ်ရပ်များနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုတို့အကြားအသင်းအဖွဲ့များ Non-ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်, သူတို့ရှက်ကြောက် (သို့မဟုတ်ကမကထပြုခဲ့) လျက်ရှိသည်ကြောင်းဖြစ်ခြင်းအဆိုပါယူဆချက်, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသာယာဝပြောရေး (ဖြစ်ပါတယ်8, 9), သို့မဟုတ် shared မျိုးဗီဇနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းအချက်တွေ (10).
ကို 'Self-ဆေး' နဲ့ 'artefact' 'ယူဆချက်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်သုတေသန (ဆိုးရွားသောကလေးဘဝအတွေ့အကြုံများမှအထူးအာရုံစိုက်ပေးသည်11-15), ကလေးတွေဒုက္ခအနာဂတ်ကျန်းမာရေးအပြုအမူတွေနှင့်ရလဒ်ပေါ်ရှိစေခြင်းငှါမဆိုအလားအလာရေရှည်အနုတ်လက္ခဏာလွှမ်းမိုးမှုမှအလွန်အမင်းအားနည်းချက်စဉ်းစားနေကြသည်အဖြစ် (16-18) ။ ဆိုးရွားသောကလေးဘဝအတွေ့အကြုံများနှင့် psychopathology ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှု, လျစ်လျူရှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှု၏စိတ်ဒဏ်ရာအပေါ်အများစုအာရုံစိုက်စုံစမ်းစစ်ဆေးအတော်များများလေ့လာမှုများ (ဥပမာတွေ့မြင်များအတွက်: (8, 9, 19-21)) ။ သုတေသီများကလည်း (အနာဂတ်ဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုများအတွက်အန္တရာယ်အချက်များ confounding အဖြစ် (ဥပမာမိဘမူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်သုံးစွဲခြင်းမမှန်မှုများကဲ့သို့) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အလားအလာမျိုးဗီဇအချက်များထည့်သွင်းစဉ်းစားကြ17, 18).
သို့သော်အတိတ်သုတေသန '' မမျှော်လင့်ဘဲ '' ဆိုးရွားသောကလေးဘဝအတွေ့အကြုံများချေါနိုင်ဖြစ်ရပ်များလျော့နည်းအာရုံကိုပေးသည်။ ဤဝေါဟာရကိုအလားအလာကိုလည်း operationalize ထားတဲ့အလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်လစ်လျူရှု၏ပုံစံများအဖြစ်ခွဲခြားမရအသက်တာကိုပြောင်းလဲကလေးဘဝဖြစ်ရပ်များသတ်မှတ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုဖြစ်ပါသည် DSM-IV ဖိအားစံ။ ထိုသို့သောဖြစ်ရပ်များသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်: ဈ) စိတ်ဒဏ်ရာ '' ပထမဦးဆုံးလက် '' ကြုံတွေ့နှင့် ii) စိတ်ဒဏ်ရာ '' ဒုတိယ-လက် '' ကြုံတွေ့တစ်ဦးကိုချက်ချင်းမိသားစုဝင် (မိဘ / မှေးခငျြး) မှဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကြောင့်စိတ်ဒဏ်ရာများ၏ဆိုလိုသည်မှာသင်ယူမှု (22, 23) ။ ဒီလေ့လာမှုကအဆုံးစွန်သောအုပ်စုတစ်စုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ရကြမည်။
DSM- အားဖြင့်ပဲ့ထိန်းခံရIV ဖိအားစံနှုန်း (22, 23), ကျနော်တို့ဆွီဒင် registry ကိုဒေတာကနေစက္ကန့်လက်စိတ်ထိခိုက်ကလေးဘဝအတွေ့အကြုံများအဘို့အလေးအသင့်လျော် proxy များဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားချက်ချင်းမိသားစုဝင်ပါဝင်သည်: ဈ) iii) အမြဲတမ်းမသန်စွမ်းမှုမှအဓိကဦးဆောင်ပြင်းထန်မတော်တဆဒဏ်ရာခံစားနေရပြီး, ii) စော်ကားခံရခြင်း, ကင်ဆာကင်ဆာရောဂါခံများနှင့်ဃ) အသေခံ။ ကျနော်တို့ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကာလအတွင်းစိတ်ဒဏ်ရာ၏ဒုတိယလက်အတွေ့အကြုံများကိုလည်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှု evoking နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်, နောက်ပိုင်းတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုထိခိုက်စေရန်အလားအလာရှိသည် hypothesise ။
တရားမဝင်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုကိုမကြာခဏ (အသက်၏ 12-19 နှစ်ပေါင်း) (မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းစတင်သည်24) ။ ဆိုးရွားသောအတွေ့အကြုံများနှင့်ထိတွေ့ကလေးများ (အစောပိုင်းပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုကိုပွဲဦးထွက်အနေနဲ့ ပို. အန္တရာယ်ရှိတယ်25) ။ ဒီ longitudinal လေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာနှင့်ဆွီဒင်ဆယ်ကျော်သက်များ၏အမျိုးသားရေးလူဦးရေနှင့်လူငယ်လူကြီးများ (အသက် 0-14 နှစ်) အတွက်အနာဂတ်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါ (ထိုအသက်အရွယ် 15-26 နှစ်ပေါင်းကြား) ဒုတိယ-လက်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝစိတ်ဒဏ်ရာများ၏အတွေ့အကြုံများအကြားအသင်းအဖွဲ့များစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဖို့ဖြစ်တယ် ။ နောက်ထပ်မိသားစုမူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်သုံးစွဲခြင်းမမှန်မှုများထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသာယာဝပြောရေးအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုကို 'Self-ဆေးဝါး' 'အယူအဆစမ်းသပ်ဖို့ရည်ရွယ် (4), အရာ '' ဒုတိယ-လက် '' ငယ်စဉ်ကလေးဘဝစိတ်ဒဏ်ရာနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းရောဂါအကြားအသင်းအဖွဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်နေကြသည်ဖို့ဒီဂရီစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတုန်း။
မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါမျိုးဗီဇအန္တရာယ်အချက်များ, externalizing မမှန်တစ်အကွာအဝေးတစ်ခုကျယ်ပြန့်အားနည်းချက်ကလွှမ်းမိုးနေတဲ့ multifactorial syndrome ရောဂါဖြစ်ပါသည်, နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အန္တရာယ်အချက်များတစ်ခုခင်းကျင်းခြင်းဖြင့် (26) ။ ကျနော်တို့ (ဆွီဒင်နိုင်ငံတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုအပေါ်အများအပြားယခင်စာပမြေားတှငျဖျောပွထားတူညီဒေတာသတင်းရင်းမြစ်ကိုအသုံးပြု26-28) ။ တိုတိုတှငျကြှနျုပျတို့မျိုးစုံဆွီဒင်တစ်နိုင်ငံလုံးမှတ်ပုံတင်နှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဒေတာကနေဒေတာတွေကိုနှင့်ဆက်စပ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ လင့်ခ်ချိတ်အားလုံးဆွီဒင်နေထိုင်သူများမှမွေးဖွားသို့မဟုတ်လူဝင်မှုမှာတာဝန်ပေးအပ်ထူးခြားတဲ့တစ်ဦးချင်းစီ 10-ဂဏန်းပုဂ္ဂိုလ်ရေး ID နံပါတ်ကနေတစ်ဆင့်အောင်မြင်ခဲ့သည်။ အောက်ပါသတင်းရင်းမြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါဒေတာဘေ့စဖန်တီးဖို့အသုံးပြုခဲ့ကြသည်: ဆှီဒငျဆေးရုံမှတ်ပုံတင်မည်အားကုန်, 1964-2010 ကနေအားလုံးဆွီဒင်မြို့သားတို့အဘို့အားလုံးဆေးရုံတင််; ဆှီဒငျပြဌာန်းခဲ့သည့်မူးယစ်ဆေးမှတ်ပုံတင်မည်, ဆွီဒင်အားလုံးကိုဆေးညွှန်း် 2005 ထံမှ 2009 မှလူနာအားဖြင့်တက်ခူး; 2001 မှ 2010 ကနေအားလုံးပြင်ပလူနာဆေးခန်းမှသတင်းအချက်အလက်များပြင်ပလူနာပြုစုစောင့်ရှောက်မှုမှတ်ပုံတင်မည်, စတော့ဟုမ်းနှင့်အလယ်တန်းဆွီဒင်ကနေ 2001 သန်းလူနာတွေအတွက် 2007-1 ထံမှပြင်ပလူနာ diagnoses င်မူလတန်းကနျြးမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမှတ်ပုံတင်မည်, 1973-2011 ကနေအားလုံးယုံကြည်မှုများအပေါ်အမျိုးသားရေးဒေတာများဆှီဒငျရာဇဝတ်မှုမှတ်ပုံတင်မည်, ပြင်းပြင်းထန်ထန် 1998-2011 ကနေရာဇဝတ်မှုသံသယအားလုံးတစ်ဦးချင်းစီအပေါ်အမျိုးသားရေးဒေတာများဆှီဒငျသံသယမှတ်ပုံတင်မည်, နှင့်သေခြင်း၌ရှိသမျှသောအကြောင်းတရားများ်ဆှီဒငျသေဆုံးမှုမှတ်ပုံတင်မည်။
မှီခို variable ကို - မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါ
ကျနော်တို့ကနေတဆင့်ဆွီဒင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်ထံမှမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါဖြစ်ပွားမှုဖော်ထုတ် ICD codes တွေကို: ICD8: မူးယစ်ဆေးမှီခို (304); ICD9: မူးယစ်ဆေး psychoses (292) နှင့်မူးယစ်ဆေးမှီခို (304); ICD10: အရက် (F10) သို့မဟုတ်ဆေးရွက်ကြီး (F19)) ကြောင့်သူတို့အား မှလွဲ. psychoactive ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်း (F10-F17), ကြောင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အမူအကျင့်မမှန်; codes တွေကိုအားဖြင့်ရာဇဝတ်မှုမှတ်ပုံတင်မည်အတွက်: 3070 (မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာမောင်းနှင်), 5010, 5011 နှင့် 5012 (တစ်ဦးတရားမဝင်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်နှင့်အသုံးပြုခြင်း) နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး (ဥပဒ 1968 ဖုံးအုပ်ဥပဒေများမှကိုးကား by: 64, အပိုဒ် 1, အမှတ်6(အပိုင်, အသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်အခြားစွဲချက်တရားမဝင်တ္ထုများနှင့် ပတ်သက်. )) နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွယ်သည့်မောင်းနှင်မှုပြစ်မှုများ (ဥပဒ 1951: 649, အပိုဒ် 4, ပုဒ်မခွဲ2နှင့်အပိုဒ် 4A, ပုဒ်မခွဲ 2) ။
မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါနောက်ထပ် (ပျမ်းမျှ) ညှို့နှင့် Sedatives ဖြစ်စေ၏ထက်ပိုလေးသတ်မှတ်ထားသောနေ့စဉ်ဆေးများ (Anatomical ကုထုံးဓာတု (ATC) အမျိုးအစားခွဲခြား System ကို N05C နှင့် N05BA ထုတ်ယူခဲ့သူသတ်မှတ်ထားသောမူးယစ်ဆေးမှတ်ပုံတင်မည်အတွက် (ကင်ဆာခံစားနေရပြီးသူတွေကိုဖယ်ထုတ်ပြီး) တစ်ဦးချင်းစီအတွက်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည် ) သို့မဟုတ် Opioids (ATC: တစ် twelvemonth ကာလအတွင်း N02A) ။ ဒီလေ့လာမှုက Lund, ဆွီဒင် (Dnr 30 / 2011) အတွက်ဒေသဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာသုံးသပ်ချက်ကိုဘုတ်အဖွဲ့က 2011th နိုဝင်ဘာလ 675 အပေါ်အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
ကျနော်တို့ကိုသူတို့အသက် 1984 နှစ်ပေါင်းလှည့်ပြက္ခဒိန်နှစ်ကုန်မှာဆွီဒင်နိုင်ငံတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသူ 1995 မှဆှီဒငျလူဦးရေမွေးဖွား 14 အားလုံးကိုတစ်ဦးချင်းစီနမူနာ။ ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆက်တွဲအချိန် (ဆိုလို: 6.2 နှစ်ပေါင်း; အကွာအဝေး 11 နှစ်) နှစ်တွင်မှာစတင်ခဲ့သူတို့ 15 လှည့်နှင့်တစ်နှစ် 2011 (N ကို = 1,409,218) မှဆက်လက်ပြောကြားသည်။
လွတ်လပ်သော variable တွေကို
ကျနော်တို့ကို အသုံးပြု. လေးစက္ကန့်လက်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝစိတ်ဒဏ်ရာဖော်ထုတ် ICD ဆွီဒင်ဆေးရုံဆေးရုံမှဆင်းခွင့်မှတ်ပုံတင်မှထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အပျက်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုနမူနာ၏မိသားစုဝင်များချက်ချင်းဖြစ်လာသည် (မိဘများ / မွေးချင်းများ - ကြည့်ပါ) နောကျဆကျတှဲ ဘို့ ICD codes တွေကို) ။ ကင်ဆာကင်ဆာဒါတွေကပါဝင်သည် diagnoses; အမြဲတမ်းမသန်စွမ်းမှု (ကျောရိုးဒဏ်ရာသို့မဟုတ်ခြေလက်အပြည့်အဝ / တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဆုံးရှုံးမှု (s)) မှဦးဆောင်မတော်တဆထိခိုက်ဒဏ်ရာ; ချေမှုန်းရေး၏သားကောင်; နှင့်သေခြင်း။
ပထမဦးစွာကျနော်တို့လေးယောက်စလုံးဖြစ်ရပ်များမှတုံ့ပြန်မှုကဉျြးခြုပျကတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာ '' မမျှော်လင့်ဘဲဆိုးရွားသောကလေးဘဝအတွေ့အကြုံကို '' variable ကိုဖန်တီးခဲ့သည်။ ဤသည် variable ကိုသာကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုလူဦးရေ၏မိဘများမဟုတ်ဘဲသူတို့ရဲ့မောင်နှမ (1 / 0) တိုက်ရိုက်စိတ်ဒဏ်ရာကိုယ်စားပြုသည်။ ကျနော်တို့ကိုလည်းလေးခုဖိအားဖြစ်ရပ်များအသီးအသီးအဘို့အ dichotomous (1 / 0) variable ကိုဖန်တီးထိခိုက်နစ်နာမိသားစုဝင် (မိဘသို့မဟုတ် Full-မှေးခငျြး) ကသူတို့ကို stratified ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုလူဦးရေ 0-14 နှစ်ရှိခဲ့ကြသည်နေတုန်းမဆိုဒုတိယ-လက်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝဖိအား (အထက်သတ်မှတ်ကဲ့သို့) ချက်ချင်းမိသားစုဝင်မှဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကြရပေမည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအတွက် covariate အဖြစ်မိဘကွာရှင်းပါဝင်သည်။ ကွာရှင်းတစ် DSM အဖြစ်အရည်အချင်းပြည့်မှီပါဘူးသော်လည်း-IV ဖိအားယခင်လေ့လာမှုများမိသားစုဖွဲ့စည်းပုံနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းရောဂါ (အကြားအသင်းအဖွဲ့များတွေ့ပြီ29-32) ။ လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းမရှိဘဲတွဲပြီးဆွီဒင်အတွက်ဘုံသည်အတိုင်း, ကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီနှစ်ဦးစလုံးဟာသူတို့ရဲ့မိဘတွေနဲ့အတူနေထိုင်ရပ်စဲကြောင်းတစ်နှစ်အဖြစ် '' ကွာရှင်း '' ၏တစ်နှစ်သတ်မှတ်။
အားဖြင့်သတ်မှတ်ပါတယ်ကဲ့သို့သောအခြား considered covariates, ငါတို့လေ့လာမှုလူဦးရေရဲ့ကျား, မ, သူတို့၏မိဘများ '' ပညာရေး, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသာယာဝပြောရေး, မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အရက်သေစာအသုံးပြုမှုမမှန်ခဲ့ကြ ICD codes တွေကို (17, 18, 33, 34) ။ မောင်နှမတွေထဲမှာသာမူးယစ် (မအရက်သေစာ) ရောဂါကိုအသုံးပြုဖို့အလားအလာရှက်ကြောက် (စဉ်းစားခဲ့သည်34) ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နမူနာအတွက်ကနဦးအရက်သုံးစွဲခြင်းရောဂါရောဂါ၏ယုတ်အသက်အရွယ် 41.9 နှစ်ပေါင်းဖြစ်သကဲ့သို့, ငါတို့ထိုကဲ့သို့သောအပြုအမူယူဆနောက်ပိုင်းမှာအသက်တာ၌အသက်အရွယ် 15-24 နှစ်အကြားကသူတို့ရဲ့မောင်နှမ '' မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအပေါ်အနည်းငယ်သာသို့မဟုတ်လုံးဝမသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိလိမ့်မယ်။ ထို့အပြင်လွန်ခဲ့သည့်သုတေသနလုပ်ငန်း (အခြားမှေးခငျြးရဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါပေါ်မှေးခငျြးအရက်သုံးစွဲခြင်းရောဂါတို့အကြားမျှသိသာအသင်းအဖွဲ့အကြံပြု35, 36).
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုလူဦးရေ 0-14 နှစ်ပေါင်းအသက်ခံခဲ့ရနေတုန်းကျနော်တို့ (ကိုတွေ့မြင်အားလုံး covariates တိုင်းတာ မှီခို variable ကို အဓိပ္ပာယ်နှင့် နောကျဆကျတှဲ အားလုံးအတွက် ICD codes တွေကို) ။
ကြောင့်မွေးတနှစ်နှင့်လပေါ်တွင် အခြေခံ. ကွဲပြားခြားနားသောထိတွေ့မှုကာလမှ, ငယ်စဉ်ကလေးဘဝဖိအားနှင့်နောက်ဆက်တွဲမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါအကြားအသင်းအဖွဲ့များဆန်းစစ်နိုင်ရန်အတွက်ကျနော်တို့သည်အထိအသက်အရွယ် 15 နှစ်ပေါင်းထံမှအားလုံးတစ်ဦးချင်းစီအားစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ကော့အချိုးကျဇက်ဆုတ်ယုတ်အသုံးပြုသွားမည်: ပထမဦးဆုံး၏ဈ) အချိန်ကို မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါ၏မှတ်ပုံတင်; ii) မသေမှီတိုင်အောင်, သို့မဟုတ် iii) ပထမဦးဆုံးသို့ရောက်လာသည်ကိုမဆိုနောက်ဆက်တွဲ (တစ်နှစ် 2011) ၏အဆုံးအထိပါပဲ။ Full-မောင်နှမခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတွင်ထည့်သွင်းနိုင်သကဲ့သို့, ကျွန်တော်တစ်ဦးကြံ့ခိုင်သားညှပ်ပေါင်မုခနျ့မှနျးနှင့်အတူ Non-လွတ်လပ်ရေးချိန်ညှိ။ ငါတို့ရှိသမျှသည်မော်ဒယ်များအတွက်အချိုးညီမျှမှုယူဆချက်စုံစမ်းစစ်ဆေး; ဒီမပြည့်စုံမခံခဲ့ရပါလျှင်, ငါတို့အကျိုးစီးပွားများ၏ variable ကိုနှင့်အချိန်တို့၏လော်ဂရစ်သမ်အကြားတစ်ဦးအပြန်အလှန်သက်တမ်းပါဝင်သည်။ ကျနော်တို့အပြန်အလှန်အသုံးအနှုန်းများ၏ပါဝင်မီနှင့်အပြီးနှစ်ဦးစလုံးရှိသမျှသည်အခြားသော variable တွေကိုများအတွက်အချိုးကျအန္တရာယ်ယူဆချက်စမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအတွက်အဓိကခန့်မှန်း variable ကို '' မမျှော်လင့်ဘဲဆိုးရွားသောကလေးဘဝအတွေ့အကြုံများ '' ဖြစ်ခဲ့သည်။
မော်ဒယ် 1 ကျွန်တော်တို့ရဲ့တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာ '' မိဘ '' ငယ်စဉ်ကလေးဘဝဖိအား variable ကိုတစ်ရေနံစိမ်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့သည်။ မော်ဒယ်2မိဘကွာရှင်း, မိဘပညာရေးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုလူဦးရေရဲ့ကျားများအတွက်ချိန်ညှိ။ မော်ဒယ်3နောက်ထပ် (မိဘမူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်သုံးစွဲခြင်းမမှန်မှုများနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီကို၎င်း, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကနေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းဖယ်ထုတ်ပြီးဖြင့်ဖြစ်စေ) မျိုးဗီဇမိဘနှင့်သို့မဟုတ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းအချက်တွေများအတွက်ချိန်ညှိ။ မော်ဒယ်4နောက်ထပ်များအတွက်ချိန်ညှိ မိသားစု မျိုးဗီဇနှင့်သို့မဟုတ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းအချက်တွေလည်းအပြည့်အဝ-မှေးခငျြးမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီဖယ်ထုတ်ပြီးဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့လေးယောက်ကသီးခြားဖိအားအမျိုးအစား, မိဘများနှင့် / သို့မဟုတ် Full-မောင်နှမဖို့ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကြောင်း & Models A1a-A1d စမ်းသပ်ခြင်းဖြစ်ရပ်များ၏တစ်ဦးချင်းစီ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်သီးခြားဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ မော်ဒယ် A2a-A2d များအတွက်ချိန်ညှိနေတုန်း, A1a-A1d အတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထပ်ခါတလဲလဲ အားလုံး မော်ဒယ်4အတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားအလားအလာရှက်ကြောက်။
တစ်ဦး sensitivity ကိုစမ်းသပ်သကဲ့သို့, ဆွီဒင် Multi-မျိုးဆက်ကျောင်းသားများမှတ်ပုံတင်မည်အားဖွငျ့, ငါတို့မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စုပေါင်း '' မမျှော်လင့်ဘဲဆိုးရွားသောကလေးဘဝအတွေ့အကြုံကို '' variable ကို (N ကိုများအတွက်စိတ်တိုးပွားခဲ့ကြသောသူအပေါင်းတို့သည်ပထမဦးဆုံးဝမ်းကွဲနှင့် Full-မှေးခငျြးအားလုံးဖော်ထုတ် (ပထမဝမ်းကွဲ) = 25,522 အားလုံးအတွက်; N ကို (Full-မောင်နှမ) = 5772 အားလုံး) ။ ဒါကကျနော်တို့အခြားမဖြစ်စေနေချိန်မှာတဦးတည်း (0-14 နှစ်ပေါင်းအသက်) ရှိရာဝမ်းကွဲနှင့်မောင်နှမအားလုံး (သေးဖိအားအဖြစ်အပျက်၏ထိုအချိန်ကမွေးဖွားခဲ့သည်, သို့မဟုတ်ပါကအသက် 15 နှစ်သို့မဟုတ်ပိုပြီးကြုံတွေ့မဟုတ်ကဲ့သို့), ထိုဖိအားကြုံတွေ့နှိုင်းယှဉ်ဆိုလို ။ အဆိုပါကော့အချိုးကျအန္တရာယ်မော်ဒယ်ဝမ်းကွဲ / မှေးခငျြးစပျစ်သီးပြွတ်များအတွက်ညှိထို့ကြောင့်အမည်မသိ shared မျိုးဗီဇနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းအချက်တွေရဲ့ array တွက်သည်။ မော်ဒယ် S1 တစ်ရေနံစိမ်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပေး; မော်ဒယ် S2 နောက်ထပ်မိဘကွာရှင်းမှုအတွက်ချိန်ညှိ။ အားလုံးစာရင်းအင်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း SAS 9.3 (သုံးပြီးဖျော်ဖြေခဲ့ကြ37).
စားပွဲတင် 1 ကြိမ်နှုန်းနှင့်ကလေးတစ်ဦးအဖြစ်စိတ်ဒဏ်ရာတွေ့ကြုံတော်မူသောငါတို့၏လေ့လာမှုလူဦးရေ၏ရာခိုင်နှုန်း '' ဒုတိယ-လက် '' ကိုပြသထားတယ်, ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦးကိုချက်ချင်းမိသားစုဝင်မှစိတ်ဒဏ်ရာများ၏သိလာတယ်။ အဆိုပါစိတ်ဒဏ်ရာ, သီးခြားအမျိုးအစားကဲ့သို့) ဈ) တစ်ဦးတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာအတိုင်းအတာနှင့် ii အဖြစ်တင်ဆက်ကြသည်အားလုံးရလဒ်များကိုမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါဖွငျ့ stratified ခံရ။ စားပွဲတင်2& Models 1-4 ကနေရလဒ်တွေကိုတွေ့ရမယ်။ (အသက်အရွယ်မရွေး 15-26 နှစ်ပေါင်းကြား) တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောကလေးဘဝဖိအားထိတွေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုလူဦးရေအတွက်တစ်ဦးချင်းစီ (အသက် 0-14 နှစ်), ထက်ပိုမိုနှစ်ကြိမ်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါ (မော်ဒယ် 1, လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် = 2.12 (မှတ်ပုံတင်ခံရဖို့ဖွယ်ရှိကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ 95% ယုံကြည်မှုကြားကာလ (CI) 1.96-2.30)) ။ အဆိုပါဆွေမျိုးအန္တရာယ်မိဘပညာရေးနှင့်နမူနာလူဦးရေကျား, မ (မော်ဒယ် 2, လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် = 2.39 (2.16-2.65)) များအတွက်ညှိနှိုင်းမှုအပြီးတိုးတက်လာခဲ့သည်။ မိဘ၏မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အရက်သေစာအသုံးပြုမှုမမှန်များအတွက်ညှိနှိုင်းမှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါ (မော်ဒယ် 3) နှင့် Full-ဝမ်းကွဲနှင့် Full-မှေးခငျြးမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါ (မော်ဒယ် 4) ပြီးနောက်, ဆွေမျိုးအန္တရာယ် 1.98 ((HR = 1.73 (2.27-1.94) နှင့် 1.67 လျော့နည်းသွား အသီးသီး -2.25),)) ။ သာစံပြ2(0.87 (0.81-0.94)) ၌အကြှနျုပျတို့၏စုပေါင်းဖိအား variable ကိုများနှင့်ကျားမအကြားသိသိသာသာအပြန်အလှန်သက်တမ်းရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါအချိုးညီမျှမှုယူဆချက်ပွညျ့စုံစမခံ, '' log ကိုအချိန် '' နှင့်စုပေါင်းဖိအား variable ကိုအကြားအပြန်အလှန်သက်တမ်းများအတွက် HR မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါအပေါ်ကလေးဘဝဖိအားများသက်ရောက်အချိန်ကျော်လျော့နည်းသွားကြောင်းအကြံပြု, မော်ဒယ် 0.85 အတွက် 0.80 (0.89-1) ဖြစ်ခဲ့သည်။
မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါ (DUD) က stratified မမျှော်လင့်ဘဲဆိုးရွားသောကလေးဘဝအတွေ့အကြုံများ (UACE) ကိုကြုံခဲ့ရသူကိုနမူနာလူဦးရေရဲ့ကြိမ်နှုန်းနှင့်အရာခိုင်နှုန်း (%), N = 1,409,218; နောက်ဆက်တွဲအချိန်: ယုတ် 6.2 နှစ်ပေါင်း; အကွာအဝေး 11 နှစ်ပေါင်း
ဟက်ဇက်အချိုးအသက်အရွယ် 95-95 နှစ်နှင့်အခြား considered covariates အကြား variable ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာ '' မမျှော်လင့်ဘဲဆိုးရွားသောကလေးဘဝအတွေ့အကြုံကို '(UACE) မှထိတွေ့မှုအပြီးအနာဂတ်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါ 0% ယုံကြည်မှုကြားကာလနှင့်အတူ (HR) (14% CI) ...
စားပွဲတင်3& Models A1a-ဃနှင့် A2a-ဃ (နောက်ပိုင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါအပေါ်တစ်ဦးချင်းစီကလေးဘဝဖိအားများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ) မှရလဒ်များကိုတင်ပြသွားပါသည်။ အဘို့အညှိနှိုင်းမှုပြီးနောက် အားလုံး ရှက်ကြောက် (& Models A2a-ဃ) ထည့်သွင်းစဉ်းစား, မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါများအတွက်အမြင့်ဆုံးဆွေမျိုး-အန္တရာယ်အမျိုးအစား (အသီးသီး HR = 2.63 နှင့် 2.39) မိဘများ၏သေခြင်းနှင့်ချေမှုန်းရေး ရှိ. , မောင်နှမများ၏ချေမှုန်းရေး (HR = 1.93) ။
ဟက်ဇက်အချိုး (အသက်အရွယ်မရွေး 95-95 နှစ်ပေါင်းကြား) တစ်ဦးချင်းစီဖိအား variable တွေကိုနှင့်အခြား considered covariates ထိတွေ့ပြီးနောက်အနာဂတ်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါ 0% ယုံကြည်မှုကြားကာလနှင့်အတူ (HR) (14% CI) ** (N ကို = 1,409,218)
ဇယား 4a နှင့် and4b4b ပထမဦးဆုံးဝမ်းကွဲများနှင့်မှေးခငျြး-pair တစုံ sensitivity ကိုကနေပြပွဲရလဒ်တွေကိုလေ့လာဆန်းစစ်။ မိဘကွာရှင်း (& Models S2) အတွက်ညှိနှိုင်းမှုပြီးနောက်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါ၏ဆွေမျိုးအန္တရာယ်ထိတွေ့ပြီးနောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာ '' မမျှော်လင့်ဘဲဆိုးရွားသောကလေးဘဝအတွေ့အကြုံကို 'ဖို့ variable ကို Full-မောင်နှမများအတွက်ပထမဦးဆုံးဝမ်းကွဲနှင့် 1.65 များအတွက် 1.46 ဖြစ်ခဲ့သည်။ အသက်အရွယ်ကွာခြားချက်အဘို့အ stratifying ပြီးနောက်အကြီးဆုံးအန္တရာယ်အဘယ်သူ၏ခြားနားချက်အသက်အရွယ်အတွက်5နှစ်ပေါင်း (တွေ့မြင်ထက်ကြီးသူတွေကိုဝမ်းကွဲ / Full-မှေးခငျြးအားလုံးတွင်တွေ့မြင်ခဲ့သည် ဇယား 4a-b).
ဟက်ဇက်အချိုးတစ်ဦးပထမဦးဆုံးဝမ်းကွဲ-pair တစုံဆန်းစစ်အတွက်အနာဂတ်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါ (DUD) ၏ 95% ယုံကြည်မှုကြားကာလနှင့်အတူ (HR) (95% CI), သူတို့ကမမျှော်လင့်ဘဲဆိုးရွားသောကလေးဘဝအတွေ့အကြုံကို (UACE) နှင့် DUD များအတွက်စိတ်တိုးပွားဖြစ်ခြင်း (N = 25,522 အားလုံးအတွက်)
ဟက်ဇက်အချိုးတစ်ဦးချင်း-pair တစုံဆန်းစစ်အတွက်အနာဂတ်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါ (DUD) ၏ 95% ယုံကြည်မှုကြားကာလနှင့်အတူ (HR) (95% CI), သူတို့ကမမျှော်လင့်ဘဲဆိုးရွားသောကလေးဘဝအတွေ့အကြုံကို (UACE) နှင့် DUD များအတွက်စိတ်တိုးပွားဖြစ်ခြင်း (N = 5772 အားလုံးအတွက်)
ဒီ longitudinal လေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ (ထိုအသက်အရွယ် 0-14 နှစ်ပေါင်းကြား) ဒုတိယ-လက်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝစိတ်ဒဏ်ရာနှင့်ဆွီဒင်ဆယ်ကျော်သက်နှင့်ငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူလူဦးရေ (အသက် 15-26 နှစ်) အတွက်နောက်ပိုင်းတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါ၏အတွေ့အကြုံများအကြားအသင်းအဖွဲ့များစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဖို့ဖြစ်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုမဆိုငယ်စဉ်ကလေးဘဝဖိအားကြုံတွေ့ခဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီ, ဒုတိယ-လက်, မသောသူတို့ကိုထက်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါ၏ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်နှစ်ကြိမ်အန္တရာယ်ခဲ့။ ပြသ ကျွန်ုပ်တို့၏စုပေါင်းဖိအား variable ကိုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းရောဂါတို့အကြားအဆိုပါအသင်းအဖွဲ့ပထမဦးဆုံးဝမ်းကွဲများနှင့်မှေးခငျြး-pair တစုံဆန်းစစ် (HR = 1.55 အတွက် attenuated ခဲ့သည် (ဂ) နှင့် 1.46 (S) မအသီးသီး); သို့သော်အဘယ်သူ၏ခြားနားချက်အသက်အရွယ်အတွက်5နှစ်ပေါင်းထက်ကြီးဝမ်းကွဲ / မောင်နှမထဲမှာ, ဆွေမျိုးစွန့်စားမှု (HR = 1.72 မြင့်မားသောရှိနေဆဲ (ဂ) နှင့် 1.92 (S) မအသီးသီး) ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာဖို့, ဒီအထူးသမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါအပေါ်ဒုတိယ-လက်ဆိုးရွားသောကလေးဘဝအတွေ့အကြုံများ၏သက်ရောက်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေး, ငါတို့ရလဒ်များကိုမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုများအတွက်အန္တရာယ်အပေါ်မိသားစုများသက်ရောက်မှုအတွင်း၌သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများအကြံပြုသက်သေအထောက်အထားများ၏တိုးပွားလာခန္ဓာကိုယ်ရန်ခွန်အားကိုထည့်သွင်းသောပထမဦးဆုံးတစ်နိုင်ငံလုံးလေ့လာမှုဖြစ်ပါတယ် ရောဂါ (26, 27, 31, 34, 38) ။ စုံစမ်းစစ်ဆေးတစ်ဦးချင်းစီဖိအားအမျိုးအစား (၏စားပွဲတင် 3), မိဘတစ်ဦး၏အသေခံမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါ (HR = 2.63) ၏အမြင့်မားဆုံးဆွေမျိုးစွန့်စားမှုရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်-အကြောင်းမရှိသေဆုံးမှု Registered ကနေမိဘအသေခံဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ သို့သျောကြှနျုပျတို့သေခြင်းတရားသည်အခြားစိတ်ဒဏ်ရာအမျိုးအစား (ကင်ဆာကင်ဆာ, လေးနက်ချေမှုန်းရေးသို့မဟုတ်မတော်တဆဒဏ်ရာဆိုလိုသည်မှာကြိုတင်ရောဂါ) ၏တစ်သွယ်ဝိုက်ရလဒ်ဖြစ်ခဲ့သည်ရှိမရှိသိရှိနိုင်ရန်နိုင်ဘူး။
မိဘအုပ်ထိန်းသူ / Full-မှေးခငျြးချေမှုန်းရေးကိုမြင်ရ, အသီးသီးနောက်ပိုင်းတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါ (HR = 4.80 နှင့် 4.49 အဘို့အမြင့်မားဆွေမျိုးစွန့်စားမှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည် စားပွဲတင် 3) ။ ဤရွေ့ကားတန်ဖိုးများအားလုံးထည့်သွင်းစဉ်းစားရှက်ကြောက် (HR များအတွက်ညှိနှိုင်းမှုအပြီးတွင် attenuated ခဲ့ကြသည် (P), = 2.39, HR (S) မ = 1.93) ။ ကို attenuation ၏အတိုင်းအတာအများဆုံးဖွယ်ရှိချေမှုန်းရေး၏အန္တရာယ်, ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်များ၏ psychopathology, ဆင်းရဲသောစိတ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေနှင့်ပညာရေး၏အောက်ခြေအဆင့်များအကြားဆက်စပ်မှု၏ဒီဂရီထင်ဟပ်။ ဤရွေ့ကားအချက်များပင်အလားအလာဒုတိယ-လက်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝစိတ်ဒဏ်ရာနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါအကြားအသင်းအဖွဲ့များရှက်ကြောက်နိုင်သည့်နောက်ခံအပြုအမူအမျိုးအစားများ၏ညွှန်ပြဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သျောထိုအန္တရာယ်သည်ဤအချက်များအဘို့အညှိနှိုင်းမှုအပြီးကျန်ရှိနေဆဲ (နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Co-ဆွေမျိုး sensitivity ကိုအတွက်လေ့လာဆန်းစစ်), ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကာလအတွင်းစိတ်ဒဏ်ရာ၏ဒုတိယလက်အတွေ့အကြုံကိုမြီးကောင်ပေါက်အရွယ် / လူကြီးအတွက်နောက်ပိုင်းတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါ၏အန္တရာယ်ကိုတိုးပွားစေသောအယူအဆမှထောက်ခံမှုချေးငှားသည်။
အခြား considered covariates ၏, ဖြစ်ခြင်းအထီးတသမတ်တည်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါ (မော်ဒယ် 4, များအတွက်ပိုမိုမြင့်မားဆွေမျိုးစွန့်စားမှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည် စားပွဲတင် 2; HR = 3.32) ။ ဤ (ယောက်ျားပုံမှန်အားနှစ်ကြိမ်ကြိုးစားပြီး (နှင့်အပျေါမှီခိုဖြစ်လာ) အားအဖြစ်များပါတယ်ကြောင့်ယခင်တွေ့ရှိချက်များနှင့်အညီအမျိုးသမီးတွေထက်တရားမဝင်တ္ထုများဖြစ်ပါသည်39, 40) ။ ကလေးတစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါနှင့်မိသားစုဖွဲ့စည်းပုံ (စုံစမ်းစစ်ဆေးအတိတ်သုတေသနကိုထင်ဟပ်ထားတဲ့မိဘကွာရှင်း (HR = 2.07), ကြုံတွေ့လျှင်အလားတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်တွေကိုနောက်ပိုင်းမှာအသက်တာ၌မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါတစ်ခုတိုးလာဆွေမျိုးစွန့်စားမှုပြသ26, 29-32) ။ ဆိုးရွားသောကလေးဘဝအတွေ့အကြုံများစုံစမ်းစစ်ဆေးကျယ်ပြန့်သုတေသန (ဥပမာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှု, ဒါမှမဟုတ်လျစ်လျူရှု) နှင့်နောက်ပိုင်းတွင်အသက်တာ၌ထိခိုက်ကျန်းမာရေးအပြုအမူတွေကို (လည်းမရှိသော်လည်း11-18, 41), အထူးသမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါအပေါ်ဒုတိယ-လက်ဖိအားဖြစ်ရပ်များ၏ဆိုးကျိုးများအားစုံစမ်းစစ်ဆေးသုတေသနကျဲဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးက PubMed ရှာဖွေရေး covariates အဖြစ်အလားတူဖိအားဖြစ်ရပ်များအပါအဝင်နှစ်ခုသာမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုလေ့လာမှုများဖော်ပြခဲ့တယ်။ (Newcomb နှင့် Harlow: နှစ်ဦးစလုံးစာတမ်းများအစမ်းသဘောစတင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်တွေကိုထောက်ခံ42'' မထိန်းချုပ်စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ရပ်များ '' ကဲ့သို့သောကွိ labeling, ဈ) မိသားစုနှင့်မိဘများ, ii) ယာဉ်မတော်တဆမှုများနှင့်နာမကျန်းနှင့် iii) နေရာပြောင်းရွှေ့:) စိတ်ထိခိုက်ဖုံးလွှမ်းနေတာကိုဖြစ်ရပ်များအုပ်စုဖွဲ့။ ထိုသူတို့သည်မိမိတို့အနှောင်းပိုင်းတွင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် (နမူနာအသက် 12-18 နှစ် N ကို = 376) ကာလအတွင်းဖြစ်ပွားလျှင်, ဤဖြစ်ရပ်များငယ်ရွယ်လူကြီးများအပေါ်ဥစ္စာအသုံးပြုမှုအပေါ်နှစ်ဦးစလုံးဟာတိုက်ရိုက်နှင့်ကမကထပြုခဲ့သက်ရောက်မှုရှိခဲ့ကြောင်းသုံးသပ်ခဲ့သည်။ ရိဒ် et al အားဖြင့်ဒုတိယလေ့လာမှု။ (43DSM နေဖြင့်သတ်မှတ်ကဲ့သို့), ငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက်ထံမှနောက်ကြောင်းပြန်ဒေတာကိုသုံး-IV ဖိအားဖြစ်ရပ်များ။ သူတို့ရဲ့ရလဒ်များကိုအစောပိုင်းဘဝစိတ်ဒဏ်ရာကြောင်းအကြံပြု, Post-စိတ်ထိခိုက်စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါ (PTSD) ၏နောက်ဆက်တွဲရောဂါနဲ့အတူဒွန်တွဲနေလျှင်, တိုးမြှင့မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုများအတွက်အန္တရာယ် (N ကို = 998) နဲ့ဆက်စပ်ခဲ့ကြသည်။
ရိဒ် et al ဖြင့်ကောက်ချက်ကိုစမ်းသပ်ဖို့ကြိုးပမ်းမှု၌တည်၏။ (43) (ငယ်စဉ်ကလေးဘဝဖိအားများနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုတို့အကြားအသင်းအဖွဲ့များ PTSD တစ်ဦးရောဂါလက္ခဏာတွေကိုကကမကထပြုခဲ့နိုင်), ကျနော်တို့နောက်ထပ် PTSD တစ်ဦးရောဂါလက္ခဏာတွေကိုခဲ့တော်မူသောငါတို့၏လေ့လာမှုလူဦးရေအတွက်အားလုံးတစ်ဦးချင်းစီဖော်ထုတ်: (ဈ) အသက်အရွယ် 0-14 နှစ်အကြား N ကို = 532), နှင့် ii) 0-26 နှစ်ပေါင်း (N ကို = 5045) တို့အကြား ICD codes တွေကိုသုံးပြီး (ICD10 F43; ICDဆှီဒငျဆေးရုံကနေ9308,309) မှတ်ပုံတင်မည်အားကုန်။ HR =0(14-2.17) နှင့် 1.93-2.35 နှစ်ပေါင်း PTSD: HR = ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဤလူတစ်ဦးချင်းစီဖယ်ထုတ်ပြီးပြီးနောက်ကလေးဘဝဖိအားတွေ့ကြုံသောသူတို့ကိုနေဆဲနှစ်ကြိမ်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ရမည်ဖွယ်ရှိအဖြစ် (0-26 နှစ်ပေါင်း PTSD ထက်ပိုခဲ့ကြ 2.12 (1.92-2.34)) ။ ဤအရလဒ်များကိုရိဒ် et al ၏စေ့စပ်ဖြန်ဖြေသီအိုရီကိုထောကျပံ့ဖို့ပေါ်လာပါဘူးသော်လည်း။ , ကဆေးရုံဆင်းမှတ်တမ်းများကနေတစ်ခုတည်းကိုသာဆင်းသက်လာ PTSD ၏နှုန်းထားများ In-depth ကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းရာမှရရှိသောသူတို့အား (ထက်အများကြီးနိမ့်ဖြစ်ရဆုံးဖွယ်ရှိဖြစ်ကြောင်းသတိပြုသင့်ပါတယ်43).
ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်အခြ၏ပြဿနာကျယ်ပြန့် (ရောဂါအတွက်အခြေအတင်ဆွေးနွေးနေသည်44), အချို့ပင်စမ်းသပ်အချက်အလက်များ၏မရှိခြင်းအတွက်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်အနက်မဖြစ်နိုင်ကြောင်းငြင်းခုံ။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုများအတွက်အန္တရာယ်မိသားစုများအတွက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြေးအဖြစ်, ထိခိုက်နစ်နာမိဘများ၏သားစဉ်မြေးဆက် (မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါများအတွက်အန္တရာယ်အချက်များအားမျှဝေပါလိမ့်မယ်34) ။ ထို့ကြောင့်, (သိသိသာသာသက်ဆိုင်တဲ့တစ်ဦးချင်းစီ၏စံနှိုင်းယှဉ်နှိုင်းယှဉ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရှက်ကြောက်၏နံပါတ်လျော့ကျစေပါတယ်) ကိုတစ်ဦး Co-ဆွေမျိုးနှိုင်းယှဉ်၏အလုပ်အကိုင်, မမျှော်လင့်ဘဲငယ်စဉ်ကလေးဘဝဖိအားနောက်ပိုင်းမှာအသက်တာ၌မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါ၏ aetiology မှသိသိသာသာအထောက်အကူပြုသောအယူအဆများအတွက်ထောက်ခံမှုပေးနိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်နှုန်းအဖြစ်, စိတ်တိုးပွားဝမ်းကွဲ / မောင်နှမဖြစ်စေရှိသည်နိုင်: ဈ) တစ်ဦးဖိအားအဖြစ်အပျက်ကြုံတွေ့ဘယ်တော့မှ (သေးမွေးဖွားမဟုတ်); သို့မဟုတ် ii) 14 နှစ်ပေါင်းထက်အသက်ကြီးတဲ့အနေနဲ့အသက်အရွယ်မှာကြုံတွေ့; ထို့ကြောင့်ကြောင့်ဒီစမ်းသပ်မှုထဲမှာမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါများအတွက်အန္တရာယ်လျှော့တွက်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ခြေဖြစ်ပါတယ်။
မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါများအတွက်အန္တရာယ်အဘယ်သူ၏အသက်အရွယ်ကွာခြားချက်6နှစ်ပေါင်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုခဲ့ Co-ဆွေမျိုး probands အတွက်အားကောင်းခဲ့သည်။ ဤသည် (တို့ကြောင့်သူ၏အသက်အရွယ်ကွာခြားချက်5နှစ်သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းခဲ့ဝမ်းကွဲ / မှေးခငျြးအားလုံး, ပတျဝနျးကငျြဆိုငျရာအချက်များ၏ပိုကြီးတဲ့ငွေပမာဏအဘို့အထိန်းချုပ်ထားသည့်အချက်ကိုမှဖြစ်မည်အကြောင်း34) ။ သို့ရာတွင်ထိုသို့အန္တရာယ်ခြားနားချက်၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီကိုဝမ်းကွဲ / မှေးခငျြးပြီးသားအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့ပါသည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါစတင်ခြင်းများအတွက်အားနည်းချက်များ၏ကာလမည်မျှထင်ဟပ်ကြောင်းလည်းဖြစ်နိုင်သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှု၏အဓိကအစွမ်းသတ္တိကိုမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုဖမ်းယူဖို့ 1995-2011 နှင့်မျိုးစုံဒေတာသတင်းရင်းမြစ်များ၏အလုပ်အကိုင်အနေအမျိုးသားရေးလူဦးရေရဲ့က၎င်း၏နှစ်ပတ်လည်နမူနာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ data တွေကိုမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါနှင့်ဤလေ့လာမှုမှာ covariates အဖြစ်အသုံးပြုရှိသမျှသည်အခြားသောဆေးဘက် diagnoses နီးပါး 100% ပြီးပြည့်စုံဖြစ်ကြသည်။ အားလုံးဆေးရုံတင်ဘို့, ကိုယ်ပိုင်သတ်မှတ်ခြင်းနံပါတ်များကိုသာ 0.4% အပေါင်းတို့နှင့်အဓိက diagnoses ၏ 0.9% ပျောက်ဆုံးခဲ့သည်။ ဤသည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါအပေါ်မမျှော်လင့်ဘဲငယ်စဉ်ကလေးဘဝဖိအားများ၏သက်ရောက်မှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်မှပထမဦးဆုံးတစ်နိုင်ငံလုံးလေ့လာမှုဖျော်ဖြေဖို့ကျွန်တော်တို့ကို enabled ။ ဒီနေသော်လည်းလည်းဆွေးနွေးကြသင့်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုအများအပြားန့်အသတ်ရှိပါတယ်။
ကျနော်တို့အသုံးချဖို့, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ, ဆေးဆိုင်နှင့်ရာဇဝတ်မှုမှတ်တမ်းများကနေမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါဖော်ထုတ် ICD ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုလူဦးရေအတွင်းအမှုပေါင်းဖမ်းဆီးဖို့ codes တွေကို။ ဒီနည်းလမ်းကိုတိကျတုံ့ပြန်ပြန်လည်သိမ်းဆည်းနှင့်အစီရင်ခံလိုအပ်မဟုတ်၏အရေးကြီးသောအားသာချက်ရှိပါတယ်နေစဉ်, misclassification ဘက်လိုက်မှုများအတွက်အန္တရာယ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ထို့အပွငျ, ဆှီဒငျမှတ်ပုံတင်ထဲမှာဖမ်းမိတစ်ဦးချင်းစီအများဆုံးဖွယ်ရှိငါတို့အားဖြင့် '' မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါ '' အမှုပေါင်းတံဆိပ်ကပ်ပိုပြီးပြင်းထန်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများ၏ Sub-အုပ်စုပိုင်။ သို့သျောလညျး, နော်ဝေအတွက်ကောက်ယူလေ့လာမှုများမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့် 3.4% ၏မှီခို၏နှုန်းထားများအစီရင်ခံ, DSM- သုံးပြီးအကဲဖြတ်III ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ registry ကို-based လေ့လာမှုအားဖြင့်တွေ့မှတူညီဖြစ်သော -r စံ, (45, 46).
ကျနော်တို့ DSM- အားဖြင့်ပဲ့ထိန်းခဲ့ကြသော်လည်းIV စိတ်ထိခိုက်ဖြစ်ရပ်များနှင့်ဖိအားစံနှုန်း (အထူးသ, ချက်ချင်းမိသားစုဝင်များမှစိတ်ဒဏ်ရာအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူ) (22), ကျနော်တို့တစ်ခုတည်းကိုသာအလွယ်တကူဆေးမှတ်တမ်းများကနေ ICD codes တွေကိုနှင့်အတူဖော်ထုတ်နိုင်ဖိအားကျွန်တော်တို့ရဲ့အနက်အပေါ်အခြေခံပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ variable တွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်။ ဒါဟာခက်ခဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုတိယ-လက်စိတ်ဒဏ်ရာထိတွေ့မှုမှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြမှဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သို့သျောကြှနျုပျတို့ diagnoses ၏ကျယ်ပြန့်အများစု (85-95% တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုထားတဲ့မှတ်ပုံတင်မည်, အားကုန်ဆှီဒငျဆေးရုံ၏ပြင်ပစာရင်းစစ်များကနှစ်သိမ့်နေကြ47).
ဒီလေ့လာမှုကဆွီဒင်လူဦးရေဒေတာအပျေါမှာအခြေခံသည်။ ဆွီဒင်နိုင်ငံတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏အဆင့်ဆင့်အခြားအနောက်နိုင်ငံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အနိမ့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျက်, ဆွီဒင်လူဦးရေအများအပြားရှုထောင့်ကနျြးမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ထောက်ခံမှုစနစ်များနှင့်အရင်းအမြစ်များကိုအခမဲ့အသုံးပြုခွင့်ရှိပါတယ်, ဤရလာဒ်များကအခြားလူဦးရေဖြစ်ကြောင်းဘယ်လို transferrable အလွယ်တကူသိသာမဟုတ်ကြောင်း, အဘယ်သူ၏နေကြသည်အဖြစ် ထိုကဲ့သို့သောအရင်းအမြစ်များကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ကန့်သတ်သည်။
လေ့လာမှုကာလတဆယ်ခြောက်နှစ်အထိချဲ့အဖြစ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့, (ထိုကဲ့သို့သောအချိန်ကာလနှင့်ဆောင်များတွင်သက်ရောက်မှုကဲ့သို့) လောကခေတ်ရေစီးကြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်အပေါ်အချို့သောသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ကြပေမည်။ သို့သော်ဆယ်စုနှစ်လေးခုကျော်ကဆွီဒင်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု၏လတ်တလောလေ့လာမှု 1997-2010 ထံမှကြောင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုမှဆေးရုံတင်အပေါ်ကာလနှင့်ဆောင်များတွင်သက်ရောက်မှု (အတော်လေးတည်ငြိမ်ကျန်ရစ်ခဲ့ကြကြောင်းထင်ရှား48).
မမျှော်လင့်ဘဲဆိုးရွားသောကလေးဘဝအတွေ့အကြုံများနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါအကြားအသင်းအဖွဲ့များပင်များအတွက်ညှိနှိုင်းမှုအပြီး, ကျန်ကြွင်းသောဤလေ့လာမှုပြပွဲ၏ရလဒ်များကို မိသားစု စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းခြင်း, မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အရက်သေစာအသုံးပြုမှုမမှန်။ ကျွန်တော်တို့သည်ထို့ကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောဖိအားအစောပိုင်း-ဘဝကိုထိတွေ့မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါမှတဦးတည်းဖြစ်နိုင်သမျှရှေ့ပြေးသောအယူအဆကိုငြင်းပယ်လို့မရပါဘူး။ ထို့အပွငျ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Co-ဆွေမျိုး sensitivity ကိုကနေရလဒ်တွေကိုမျှော်လင့်မထားတဲ့ဆိုးရွားသောကလေးဘဝအတွေ့အကြုံများနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါအကြားအသင်းအဖွဲ့များ Non-ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ဖြစ်ကြောင်း။ အကြံပြုသီအိုရီအပေါ်သွန်းသံသယလေ့လာဆန်းစစ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်တွေကိုအခြေခံပြီးလက်ရှိနှင့်အနာဂတ်မူဝါဒကနောက်ထပ်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါမှလူဦးရေရဲ့စောစောပိုပြီးအားနည်းချက်အဖွဲ့ဝင်များကိုသိရှိနိုင်ဖို့အသစ်များကိုအစပျိုးမှအကျိုးဖြစ်နိုင်တယ်။
ဤလုပ်ငန်းကိုမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု (R01 DA030005) ၏အမျိုးသားအင်စတီကျု, ဆွီဒင်သုတေသနကောင်စီ (2012-2378 (JS မှချီးမြှင့်), K2009-70X-15428-05-3 (KS) နှင့် K2012-70X-15428 ထံမှထောက်ပံ့ငွေကထောက်ခံခဲ့သည် -08-3 (KS)), အလုပ်အဖွဲ့ဘဝနှင့်လူမှုသုတေသနများအတွက်ဆွီဒင်ကောင်စီ (2007-1754: JS; 2013-1836: KS) နှင့်အရက်နှင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများ (KS) အဖြစ် ALF အပေါ်ပြန်ကြားရေးများအတွက်ဆွီဒင်ကောင်စီ တိုင်းဒေသကြီးSkåneထံမှရန်ပုံငွေ JS နှင့် KS မှချီးမြှင့်။
မမျှော်လင့်ဘဲဆိုးရွားသောကလေးဘဝအတွေ့အကြုံများ: ICD ကုဒ်များ
ICD8: 140–49, 150–59, 160–63, 170–74, 180–89, 190–99, 200–09; ICD9: 1400-2089; ICD10: C000-C970 ။
အမြဲတမ်းမသန်စွမ်းမှု (ကိုယ်လက်အင်္ဂါ (s) ကိုအပြည့်အဝ / တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအရှုံး)
ICD8 / 9: 887.x, 896.x, 897.x; ICD10: S48.0,1,9, S58.0,1,9, S68.4,8,9, S78.0,1,9, S88.0,1,9, S98.0,4, T13.6, T11.6, T05.1,2,3,4,5,6 ။
ICD8: 806.x, 958.x; ICD9: 952.x, 806.x; ICD10: S12, S12.1, S12.2, S12.7, S12.9, S14, S14.1, S24, S24.1, S34.0, S34.1, S34.3, G82.x, T06.1, T09.3, T91.1, T91.3, S22.0, S22.1, S32.0, S32.1, S32.2, S32.7, S32.8 ။
ICD8 / 9: E960-E969; ICD10: X850-Y099 Y87.1 ။
မိဘစိတ်ကျန်းမာရေး status ကို
ICD8: 295.xx, 296.xx, 298.xx, 297.xx, 299.xx, 300.xx 301.xx; ICD9: 295-316; ICD10: F20–29, F30–39, F50–59, F60–69.
ICD8: 291, 980, 571, 303; ICD9: 291, 303, 305A, 357F, 425F, 535D, 571A-D ကို, 980, V79B; ICD10: F10 (ဖယ်ထုတ်ပြီးစူးရှသောအရက်မူးယစ်: F10.0), Z50.2, Z71.4, E24.4, G31.2, G62.1, G72.1, I42.6, K29.2, K70.0-K70.9, K85.2, K86.0, O35.4, T51.0-T51.9; သတ်မှတ်ထားသောမူးယစ်ဆေးမှတ်ပုံတင်မည်အတွက်ခန္ဓာဗေဒကုထုံးဓာတု (ATC) codes တွေကို: disulfiram (N07BB01), acamprosate (N07BB03), သို့မဟုတ် naltrexone (N07BB04) ။ ယင်းရာဇဝတ်မှုမှတ်ပုံတင်များတွင်: သို့မဟုတ်ရေကြောင်းသင်္ဘောအုပ်အရက်မူး (1951 ဥပဒ 649): ထို့အပြင်ကျွန်တော်အရက်မူးကားမောင်း (1994 ဥပဒ 1009) အနည်းဆုံးနှစ်ခုယုံကြည်မှုများနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့အရက်-ဆက်စပ်သေခြင်းတရားအပေါ်ဒေတာရယူမရဏမှတ်ပုံတင်မည်၏အကြောင်းရင်းအသုံးပြုသောနှင့်အထက်ကဲ့သို့တူညီသော codes တွေကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။
မိဘ / အပြည့်အဝ-မှေးခငျြးမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါ codes တွေကိုအဓိကစာသားကိုအတွက်မှီခို variable ကိုများအတွက်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့တူညီခဲ့ကြသည်။
အကျိုးစီးပွားကြေညာစာတမ်း: ဒီလေ့လာမှုများအတွက်ရန်ပုံငွေရှာခြင်း NIDA Grant က R01 DA030005, ဆွီဒင်သုတေသနကောင်စီ Grant က 2012-2378MH နှင့် K2012-70X-15428-08-3 နှင့်အလုပ်အဖွဲ့ဘဝနှင့်လူမှုသုတေသနထောက်ပံ့ရေး 2007-1754 နှင့် 2013-1836 များအတွက်ဆွီဒင်ကောင်စီကထောက်ပံ့ခဲ့သည်; အဆိုပါဖျောပွအလောင်းတွေလေ့လာမှုဒီဇိုင်းမရှိထပ်မံအခန်းကဏ္ဍရ၏ ဒေတာများစုဆောင်းခြင်း, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်အနက်ကိုပြခြင်း, အစီရင်ခံစာ၏အရေးအသားကိုပြခြင်း, သို့မဟုတ်ထုတ်ဝေရန်များအတွက်စက္ကူတင်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ပါ။
1 ။ BRESLAU N ကို, Davis GC, Schultz LR ။ Posttraumatic စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါနှင့်နီကိုတင်း၏ဖြစ်ပွားမှု, အရက်နှင့်စိတ်ဒဏ်ရာကြုံတွေ့ကြသူပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်နဲ့အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးမမှန်။ အထွေထွေစိတ်ရောဂါကုသမှု၏မော်ကွန်း။ 2003; 60: 289-294 ။ [PubMed]
2 ။ Reynolds က M, MEZEY, G, Chapman က M, et al ။ လက်တွေ့တွင်လူဦးရေတလွဲနေတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာအတွက် co-နေကြလို့ပဲ Post-စိတ်ထိခိုက်စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါ။ မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်မူတည်။ 2005; 77: 251-258 ။ [PubMed]
3 ။ PEIRCE JM, KOLODNER K ကို BROONER RK, KIDORF က MS ။ မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲသူများထိုးသွင်းအတွက် Re-ထိတွေ့စိတ်ထိခိုက်ပွဲ။ ဆေးပညာ၏နယူးယောက်အကယ်ဒမီ၏မြို့ပြကနျြးမာရေး-သတင်းလွှာ၏ဂျာနယ်။ 2012; 89: 117-128 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
4. KHANTZIAN EJ ။ စွဲလမ်းစေသောရောဂါများမိမိကိုယ်ကိုဆေးဝါးယူဆချက် - ဘိန်းဖြူနှင့်ကိုကင်းမှီခိုမှုကိုအာရုံစိုက်ပါ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု၏အမေရိကန်ဂျာနယ်။ 1985; 142: 1259-1264 ။ [PubMed]
5 ။ COTTLER LB, COMPTON WM, MAGER: D, SPITZNAGEL EL, အထွေထွေ-လူဦးရေထဲကနေပစ္စည်းဥစ္စာသည်အသုံးပြုသူများအကြား JANCA အေ Posttraumatic-စိတ်ဖိစီးမှု-ရောဂါ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု၏အမေရိကန်ဂျာနယ်။ 1992; 149: 664-670 ။ [PubMed]
6 ။ အညိုရောင် PJ, ဝံပုလွေဂျေပစ္စည်း-အလွဲသုံးစားမှုနှင့် posttraumatic-စိတ်ဖိစီးမှု-ရောဂါ comorbidity ။ မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်မူတည်။ 1994; 35: 51-59 ။ [PubMed]
7 ။ RYB GE, DISCHINGER ကို PC, KUFERA ဂျာဖတ်ရန် KM ။ စွန့်စားမှုအမြင်နှင့် Impulse: အန္တရာယ်များအပြုအမူတွေနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုမမှန်နှင့်အတူအသင်းမှ။ မတော်တဆသုံးသပ်ခြင်းနှင့်ကာကွယ်ရေး။ 2006; 38: 567-573 ။ [PubMed]
8 ။ Douglas KR, Chan, G, GELERNTER J ကို, et al ။ ခံစားချက်နှင့်စိုးရိမ်စိတ်ပုံမမှန်ခြင်းဖြင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖျန်ဖြေ: ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုမှုအတွက်အန္တရာယ်အချက်များအဖြစ်ဆိုးရွားသောကလေးဘဝဖြစ်ရပ်များ။ စွဲလမ်းစေအပြုအမူ။ 2010; 35: 7-13 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
9 ။ LO CC ကို, Cheng TC ။ ငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက် '' ဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုအပေါ်ကလေးဘဝမတရားသဖွငျ့၏သက်ရောက်မှု။ မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်အလွဲသုံးမှု၏အမေရိကန်ဂျာနယ်။ 2007; 33: 139-146 ။ [PubMed]
10 ။ INGLEBY ဃရွှေ့ပြောင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအတင်းအဓမ္မ။ နယူးယောက်: Springer; 2005 ။
11 ။ ANDA RF, Brown DW, FELITTI VJ, et al ။ ဆိုးရွားသောကလေးဘဝအတွေ့အကြုံများနှင့်လူကြီးများအတွက်သတ်မှတ်စိတ်ဆေးဝါးများ။ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုဆေးပညာအမေရိကန်ဂျာနယ်။ 2007; 32: 389-394 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
12 ။ et al DUBE SR, FELITTI VJ, Dong M က။ ကလေးဘဝအလွဲသုံးစားမှု, လျစ်လျူရှုနှင့်အိမ်ထောင်စုကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏အန္တရာယ်: အဆိုပါဆိုးရွားသောကလေးဘဝအတွေ့အကြုံများလေ့လာမှု။ ကလေးအထူးကု။ 2003; 111: 564-572 ။ [PubMed]
13 ။ HEFFERNAN K ကို CLOITRE M က, TARDIFF K သည်, et al ။ စိတ်ရောဂါလူနာအတွက်တစ်သက်တာ opiate အသုံးပြုမှုကိုတစ် Correlate အဖြစ်ကလေးဘဝစိတ်ဒဏ်ရာ။ စွဲလမ်းစေအပြုအမူ။ 2000; 25: 797-803 ။ [PubMed]
et al 14. Kendler KS, BULIK CM, SILBERG J ကို။ အမျိုးသမီးများအတွက်ကလေးသူငယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူစိတ်ရောဂါနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာရောဂါ - ရောဂါကူးစက်မှုနှင့် Cotwin ထိန်းချုပ်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ အထွေထွေစိတ်ရောဂါကုသမှု၏မော်ကွန်းတိုက်။ 2000; 57: 953-959 ။ [PubMed]
၁၅။ ROHSENOW DJ၊ Corbett R၊ DEVINE as ကလေးသူငယ်များအဖြစ်အနှောက်အယှက်ပေးဆုံးသည် - မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုကိုဖုံးကွယ်ထားခြင်း။ ပစ္စည်းအလွဲသုံးစားမှုကုသမှု၏ဂျာနယ်။ 15; 1988: 5-13 ။ [PubMed]
16 ။ VANDERKOLK BA, Perry JC, Herman JL ။ Self-ဖျက်ဆီးအပြုအမူ၏ငယ်ဘဝဇစ်မြစ်။ စိတ်ရောဂါကုသမှု၏အမေရိကန်ဂျာနယ်။ 1991; 148: 1665-1671 ။ [PubMed]
et al 17. ANDA RF, FELITTI VJ, BREMNER JD ။ အလွဲသုံးစားမှုနှင့်ကလေးဘဝတွင်ကြုံတွေ့ရသောဆိုးရွားသောအတွေ့အကြုံများ၏တည်မြဲသောသက်ရောက်မှုများ - neurobiology နှင့် epidemiology မှသက်သေအထောက်အထားများပေါင်းစည်းခြင်း။ စိတ်ရောဂါကုသမှုနှင့်လက်တွေ့အာရုံကြောဆိုင်ရာဥရောပမော်ကွန်းတိုက်။ 2006; 256: 174-186 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
18 ။ FELITTI VJ, ANDA RF, NORDENBERG: D, et al ။ ရတာဟာဆိုးရွားသောကလေးဘဝအတွေ့အကြုံများ (ACE အား) လေ့လာမှုလူကြီးများအတွက်သေမင်း၏ဦးဆောင်အကြောင်းတရားများအများအပြားမှငယ်စဉ်ကလေးဘဝအလွဲသုံးစားမှုနှင့်အိမ်ထောင်စုကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ဆက်ဆံရေးမျိုး။ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုဆေးပညာအမေရိကန်ဂျာနယ်။ 1998; 14: 245-258 ။ [PubMed]
19 ။ FETZNER MG, MCMILLAN Ka, SAREEN J ကို, ASMUNDSON GJG ။ PTSD နှင့်မရှိဘဲလူတွေအတွက်စိတ်ထိခိုက်ဘဝဖြစ်ရပ်များနှင့်အရက်အလွဲသုံးစားမှု / မှီခိုအကြားအသင်းအဖွဲ့ကဘာလဲ? တစ်တစ်နိုင်ငံလုံးကိုယ်စားလှယ်နမူနာကနေတွေ့ရှိချက်။ ကမ္ဘာ့စီးပွားပျက်ကပ်နဲ့တော့ပူပန်။ 2011; 28: 632-638 ။ [PubMed]
20 ။ AFIFI ဖို့, HENRIKSEN, CA, ASMUNDSON GJG တစ် National ကိုယ်စားလှယ်နမူနာများတွင်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများထဲတွင် SAREEN ဂျေကလေးဘဝမတရားသဖွငျ့နှင့်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှု Disorders ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု-Revue Canadienne De Psychiatry ၏ကနေဒါဂျာနယ်။ 2012; 57: 677-686 ။ [PubMed]
21 ။ နယ်လ်ဆင် EC, Heath AC အ, LYNSKEY MT, et al ။ licit နှင့်တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါး-related ရလဒ်များအဘို့ကလေးဘဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးမှုနှင့်အန္တရာယ်များ: တစ်အမွှာလေ့လာမှု။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာ။ 2006; 36: 1473-1483 ။ [PubMed]
22 ။ BRESLAU N ကို, et al Wilcox HC, စတောစျ CL ။ စိတ်ဒဏ်ရာထိတွေ့မှုနှင့် posttraumatic စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါ: မြို့ပြအမေရိကရှိလူငယ်တစ်ဦးကလေ့လာမှု။ ဆေးပညာ၏နယူးယောက်အကယ်ဒမီ၏မြို့ပြကနျြးမာရေး-သတင်းလွှာ၏ဂျာနယ်။ 2004; 81: 530-544 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
23 ။ BRESLAU N ကို, KESSLER RC, CHILCOAT HD ကို, et al ။ စိတ်ဒဏ်ရာနှင့်ရပ်ရွာထဲတွင် posttraumatic စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါ: စိတ်ဒဏ်ရာများ၏ 1996 ဒက်ထရွိုက်ဧရိယာစစ်တမ်း။ အထွေထွေစိတ်ရောဂါကုသမှု၏မော်ကွန်း။ 1998; 55: 626-32 ။ [PubMed]
24 ။ HOVDESTAD WE, TONMYR L ကို, WEKERLE ကို C, Thornton T. အဘယ်ကြောင့်ကလေးဘဝမတရားသဖွငျ့ Associated ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ပစ္စည်းအလွဲသုံးမှုနှင့်အတူဖြစ်သနည်း ရှင်းလင်းချက် & Models ၏တစ်ဦးကဝေဖန်ဆန်းစစ်ခြင်း။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်စွဲမှု၏အင်တာနေရှင်နယ်ဂျာနယ်။ 2011; 9: 525-542 ။
25 ။ TONMYR L ကို, Thornton T က, DRACA J ကို, WEKERLE C. ကလေးဘဝမတရားသဖွငျ့နှင့်ဆယ်ကျော်သက်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုဆက်ဆံရေးတစ်ဦးကသုံးသပ်မှု။ လက်ရှိစိတ်ရောဂါကုသမှုကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ 2010; 6: 223-234 ။
26 ။ KENDLER KS, SUNDQUIST K ကို OHLSSON H ကို, et al ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုများအတွက်အန္တရာယ်အပေါ်မျိုးရိုးဗီဇနှင့်မိသားစု-ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးသွဇာ: တစ်ဦးကအမျိုးသားဆွီဒင်မွေးစားခြင်းလေ့လာမှု။ အထွေထွေစိတ်ရောဂါကုသမှု၏မော်ကွန်း။ 2012; 69: 690-697 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
27 ။ KENDLER KS, OHLSSON H ကို, SUNDQUIST K ကို SUNDQUIST ဂျေပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးပထမဦးဆုံးဝမ်းကွဲအားလုံးအတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုများအတွက်မိသားစုအကြံအစည်အပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှု: တစ်ဆွီဒင်အမျိုးသားရေးလေ့လာမှု။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာ။ 2013; 23: 1-9 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
28 ။ KENDLER KS, OHLSSON H ကို, SUNDQUIST ငွေကျပ်တစ်အမျိုးသားရေးဆွီဒင်နမူနာမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှု SUNDQUIST ဂျေတစ်ဦးကငုပ်လျှိုးနေလူတန်းစားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာ။ 2013; 1: 1-10 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
29 ။ Mandara J ကို, Roger SY, ZINBARG RE ။ အာဖရိကန်အမေရိကန်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း '' ဆေးခြောက်သုံးခြင်းအသုံးပြုမှုအပေါ်မိသားစုဖွဲ့စည်းပုံ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ အိမ်ထောင်ရေးနှင့်မိသားစုများ၏ဂျာနယ်။ 2011; 73: 557-569 ။
30. SUH T က, SCHUTZ CG, ဂျိုဟန်ဆန်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင်မိသားစုဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ဆေးဝါးမဟုတ်သောမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကိုစတင်ခြင်း။ ကလေး & ဆယ်ကျော်သက်ပစ္စည်းအလွဲသုံးစားမှု၏ဂျာနယ်။ 1996; 5: 21-36 ။
31 ။ Hoffman ဟာ JP, Johnson RA ။ မိသားစုဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ဆယ်ကျော်သက်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏တစ်ဦးကအမျိုးသားရေးပုံတူ။ အိမ်ထောင်ရေးနှင့်မိသားစုဂျာနယ်။ 1998; 60: 633-645 ။
32 ။ SAKYI KS, MELCHIOR M က, CHOLLET တစ်ဦးက, SURKAN PJ ။ ပြင်သစ်လူငယ်လူကြီးများအတွက်ဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်းအပေါ်မိဘ၏ကွာရှင်းခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါ၏မိဘသမိုင်း၏ပေါင်းစပ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်မူတည်။ 2012; 126: 195-199 ။ [PubMed]
33 ။ Johnson JL, ပစ္စည်းဥစ္စာအချိုးဖောက်ဆုံး LEFF အမ်ကလေးများ: သုတေသနတွေ့ရှိချက်များခြုံငုံသုံးသပ်ချက်။ ကလေးအထူးကု။ 1999; 103: 1085-1099 ။ [PubMed]
34 ။ KENDLER KS, OHLSSON H ကို, SUNDQUIST K ကို SUNDQUIST ဂျေမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုများအတွင်းမှာပဲ-Family ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဂီယာအမျိုးအစား: တစ်ဦးကဆွီဒင်အမျိုးသားလေ့လာမှု။ ဂျေအေအမ်အေစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2013; 70: 235-42 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
35 ။ BIERUT LJ, DINWIDDIE SH, BEGLEITER H ကို, et al ။ ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခို၏မိသားစုဂီယာ: အရက်, ဆေးခြောက်, ကိုကင်းများနှင့်လေ့ဆေးလိပ်သောက်: အရက်၏မျိုးရိုးဗီဇအပေါ်ပူးပေါင်းလေ့လာမှုအနေဖြင့်တစ်ဦးအစီရင်ခံစာ။ အထွေထွေစိတ်ရောဂါကုသမှု၏မော်ကွန်း။ 1998; 55: 982-8 ။ [PubMed]
36 ။ MERIKANGAS KR, STOLAR M က, Steven DE, et al ။ ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်များ၏မိသားစုဂီယာ။ အထွေထွေစိတ်ရောဂါကုသမှု၏မော်ကွန်း။ 1998; 55: 973-9 ။ [PubMed]
37 ။ SAS INSTITUTE INC ။ SAS ONLINE ကို DOC ဗားရှင်း 9.3 ။ cari, မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနား: SAS Institute မှ Inc မှ, 2008 ။
38. NEEDLE RH, SU SS, DOHERTY WJ ကွာရှင်းခြင်း၊ နောက်အိမ်ထောင်ပြုခြင်းနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များအသုံးပြုခြင်း - အလားအလာရှိသော longitudinal study ကိုလေ့လာခြင်း။ အိမ်ထောင်ရေးနှင့်မိသားစု၏ဂျာနယ်။ 1990; 52: 157-169 ။
39 ။ Warner LA က, KESSLER RC, Hugh M က, Anthony JC, Nelson သမဝါယမ။ ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲခြင်းနှင့်မှီခိုများ၏ဆက်စပ်မှုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် Comorbidity စစ်တမ်းကနေ -results ။ အထွေထွေစိတ်ရောဂါကုသမှု၏မော်ကွန်း။ 1995; 52: 219-229 ။ [PubMed]
40 ။ Greenfield SF, MANWANI စင်ကာပူဒေါ်လာ, NARGISO je ။ အမျိုးသမီးတွေအတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်၏ကူးစက်ရောဂါ။ သားဖွားနှင့်မြောက်အမေရိက၏မီးယပ်ဆေးခန်း။ 2003; 30: 413-46 ။ [PubMed]
41 ။ Brady KT, နောက်သို့ SE ။ ကလေးဘဝစိတ်ဒဏ်ရာ, Posttraumatic စိတ်ဖိစီးမှု Disorder နှင့်အရက်မူတည်။ အရက်သုတေသန-လက်ရှိပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ။ 2012; 34: 408-413 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
42. NEWCOMB MD, HARLOW LL ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင်ဘဝဖြစ်ရပ်များနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုခြင်း - ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အဓိပ္ပါယ်မဲ့မှုဆုံးရှုံးခြင်း၏သက်ရောက်မှုများကိုဖျန်ဖြေပေးသည်။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်လူမှုစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်။ 1986; 51: 564-577 ။ [PubMed]
၄၃. ရိဒ် PL၊ ANTHONY JC၊ ဘရက်စလာ N. မူးယစ်ဆေးဝါးပြproblemsနာများနှင့်ငယ်ရွယ်သောအရွယ်ရောက်သူများစိတ်ဒဏ်ရာနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါလွန်ကဲမှု - အစောပိုင်းဘဝအတွေ့အကြုံများနှင့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းမှုများသည်အရေးကြီးပါသလား။ အထွေထွေစိတ်ရောဂါကုသမှု၏မော်ကွန်းတိုက်။ 43; 2007: 64-1435 ။ [PubMed]
44. Rothman KJ, GREENLAND က S, POOLE ကို C, LASH TL ။ Causation နှင့်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်အခြ။ ခုနှစ်တွင်: Rothman KJ, Greenland S, Lash TL, အယ်ဒီတာများ။ ခေတ်သစ်ကူးစက်ရောဂါ။ Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2008 စစ။ 5-31 ။
45 ။ HIBELL B, GUTTORMSSON ဦး, AHLSTROM S က, et al ။ အဆိုပါ 2007 ESPAD အစီရင်ခံစာ: 35 ဥရောပနိုင်ငံများအတွက်ကျောင်းသားများအနက်ပစ္စည်းအသုံးပြုခြင်း။ အရက်နှင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများ (နိုင်) ရက်နေ့တွင်ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနဆှီဒငျကောင်စီ; 2007 ။
46 ။ KRAUS L ကို, သြဂတ် R ကို, FRISCHER M က, et al ။ ဥရောပသမဂ္ဂနှင့်နော်ဝေနိုင်ငံများ၌အမျိုးသားရေးအဆင့်မှာပြဿနာမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏ပျံ့နှံ့ခန့်မှန်း။ စွဲလမ်း။ 2003; 98: 471-485 ။ [PubMed]
47 ။ LUDVIGSSON JF, ANDERSSON အီး, EKBOM တစ်ဦးက, et al ။ ဆှီဒငျအမျိုးသားရေးအတွင်းလူနာမှတ်ပုံတင်များ၏ပြင်ပပြန်လည်သုံးသပ်နှင့် validation ကို။ BMC ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး။ 2011; 11: 1471-2458 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
48 ။ GIORDANO Gn, OHLSSON H ကို, KENDLER KS, et al ။ စုစုပေါင်းဆွီဒင်လူဦးရေအတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုဆေးရုံမှာအသက်, ကာလနှင့်ဆောင်များတွင်ခေတ်ရေစီးကြောင်း (1975-2010) မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်မူတည်။ 2013; ရှေ့ဆက်ပုံနှိပ်၏ 19 EPub ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]